Posted by Tranquillus | Jan 7, 2019 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Ny mpiasa Frantsay dia mandany amin'ny ampahefatry ny herinandro amin'ny mailaka an-jatony an-jatony izay alefany ary mandray isan'andro.
Na izany aza, na dia eo aza ny hoe mijanona ao anaty boaty izahay, dia ampahany tsara amin'ny fotoanantsika, maro amintsika, na dia ny matihanina aza dia tsy mbola mahay mampiasa ny mailaka tsara.
Raha ny marina, raha omena ny habetsaky ny hafatra izay vakiantsika sy manoratra isan'andro, dia mety hanao fahadisoana mahasosotra isika, izay mety hisy vokany ratsy eo amin'ny orinasa.
Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia namaritra ny fitsipika manan-danja indrindra amin'ny "cybercourt" izahay mba hahafantarana.
Ampidiro ny tsipika mazava sy mivantana
Ny ohatra momba ny lohahevitra iray tsara dia ahitana ny "Daty mody voatonona", "Fanontaniana haingana amin'ny fanolorana" na "Soso-kevitra momba ny tolo-kevitra".
Matetika ny olona no manapa-kevitra ny hanokatra a mailaka Miankina amin'ny andalana lohahevitra, mifidiana iray izay mampahafantatra ny mpamaky fa mamaha ny olan'izy ireo na ny olan'ny orinasa ianao.
Ampiasao adiresy mailaka matihanina
Raha miasa ho an'ny orinasa iray ianao dia tsy maintsy mampiasa ny adiresy imailaka misy anao. Fa raha mampiasa kaonty mailaka manokana ianao, na ianao malalanao na te hampiasa izany indraindray amin'ny lalao ara-barotra, tokony hitandrina ianao rehefa mifidy ity adiresy ity.
Tokony hanana adiresy imailaka foana ianao izay mitondra ny anaranao mba hahalalan'ny mpandray azy hoe iza no mandefa ny mailaka. Aza mampiasa adiresy mailaka tsy mety amin'ny asa.
Mieritrereta tsara alohan'ny tsindrio ny "valio daholo"
Tsy misy te-hamaky mailaka avy amin'ny olona 20 izay tsy misy ifandraisany amin'izy ireo. Mety ho sarotra ny tsy firaharahana mailaka, satria maro ny olona mahazo fampandrenesana momba ny hafatra vaovao amin'ny findainy smartphone na manelingelina hafatra pop-up amin'ny efijery informatika. Aza mifidy ny "valio daholo", raha tsy heverinao fa tokony handray ilay mailaka ny mpikambana rehetra ao amin'ilay lisitra.
Ampidiro ny andian-tsoratra iray
Omeo fanazavana momba anao ny mpamaky anao. Amin'ny fitsipika ankapobeny, dia asehoy ny anaranao, ny lohateninao, ny anaran'ny orinasa ary ny fampahafantarana amin'ny fifandraisana, anisan'izany ny laharan'ny findainao. Azonao atao koa ny mampiditra dokam-barotra ho an'ny tenanao, saingy aza mandeha lavitra loatra amin'ny teny na fanoharana.
Ampiasao ny dika mitovy, ny habe, ary ny loko mitovy amin'ny ambiny amin'ny mailaka.
Aza mampiasa fomba fiteny mahazatra sy mahazatra toy ny "Hello", "Hi!" Na hoe "Ahoana ianao?"
Ny toetra mahafinaritra amin'ny asa soratrantsika dia tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fiarahabana amin'ny mailaka. "Hi!" Dia fiarahabana tsy ara-potoana ary amin'ny ankapobeny dia tsy tokony hampiasaina amin'ny toe-draharaha eo amin'ny asa. Ampiasao "Hello" na "Good Evening".
Ampiasao ny teboka fanalahidy amin'ny fandeferana
Raha misafidy ny hampiasa feom-borona ianao dia ampiasao fotsiny mba hanehoana ny hafanam-ponao.
Indraindray dia tezitra ny vahoaka ary mametraka marika maromaro maromaro amin'ny faran'ny sazy nataony. Ny vokatr'izany dia toa toa mampihetsi-po loatra na tsy matotra, ny teboka fanamarihana dia tokony hampiasaina amin'ny fomba an-tsoratra an-tsoratra.
Mitandrema amin'ny hatsikana
Ny hatsikana dia mety ho very tanteraka amin'ny fandikan-dalàna raha tsy misy ny feony na ny endriky ny tarehiny. Amin'ny fifanakalozana matihanina, tsara kokoa ny mamela ny vazivazy amin'ny mailaka, raha tsy fantatrao tsara ilay mpandray. Ankoatra izany, zavatra izay eritreretinao fa mahatsikaiky dia mety tsy ho an'ny olon-kafa.
Fantaro fa samy hafa ny kolontsaina miteny sy manoratra
Ny fifandraisana mahantra dia mety hitranga mora noho ny fahasamihafan'ny kolontsaina, indrindra amin'ny endrika voasoratra rehefa tsy afaka mahita ny fitenin'ny vatana isika. Ampifanaraho amin'ny hafatra ara-kolotsain'ny mpandray na ny fahalalanao ny hafatrao.
HAMAKY Mariho ny fakana an-tariby, toro-hevitra mahomby
Tsara ny mitadidy fa ny kolontsaina mifototra amin'ny teny mifototra (Japoney, Arabo na Shinoa) dia te-hahafantatra anao mialohan'ny hanaovana raharaham-barotra miaraka aminao. Vokatr'izany, mety ho mahazatra ny mpiasa ao amin'ireo firenena ireo ny mombamomba azy manokana. Etsy ankilany kosa, ny olona avy amin'ny kolontsaina ambany (Alemà, Amerikana na Scandinavian) dia maniry ny handeha haingana.
Valio ny mailakao, na dia tsy natao ho anao aza ny mailaka
Sarotra ny mamaly ny mailaka rehetra nalefa taminao, saingy tokony hiezaka ianao. Anisan'izany ny tranga izay nalefan'ny mailaka ho anao, indrindra raha ny mpandefa no miandry valiny. Tsy ilaina ny valiny, fa famantarana tsara ho an'ny mailaka, indrindra raha miasa ao amin'ny orinasa na orinasa iray ihany ny olona.
Ity misy valinteny santionany: “Fantatro fa be atao ianao, saingy tsy dia tianao ny nandefa ahy ity mailaka ity. Ary te hampahafantatra anao aho mba hahafahanao mandefa izany amin'ny olona mety. "
Avereno jerena ny hafatra tsirairay
Ny fahadisoanao dia tsy ho voamarik'ireo mpandray ny mailaka. Ary, miankina amin'ny mpandray azy, azonao atao ny manandrana manao izany.
Aza miantehitra amin'ny mpitsikilo. Vakio sy avereno vakiana imbetsaka, alaviro mafy, alohan'ny handefasana izany.
Ampio ny adiresy mailaka farany
Mialà amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka alohan'ny hanoratanao sy hanitsiana ny hafatra. Na dia mamaly hafatra hafatra iray aza dia tsara ny mamafa ny adiresin'ny mpandray azy ary mampiditra izany raha tsy efa azonao antoka fa vonona ny handefa hafatra.
HAMAKY Manorata tsara any am-piasana: penina na fitendry?
Hamarino fa efa nifidy ny mpandray ny marina ianao
Tsy maintsy mitandrina tsara ianao rehefa manoratra anarana avy amin'ny bokim-pejy ao amin'ny laharan'ny "To" amin'ny mailaka. Mora ny misafidy anarana ratsy, izay mety hahamenatra anao sy ny olona mandray ny mailaka amin'ny fahadisoana.
Mampiasà endritsoratra mahazatra
Ho an'ny taratasim-piraketana matihanina, mitazona mandrakariva ny endritsoratra, loko ary fari-pitsipika.
Ny fitsipika fototra: Ny mailaka dia tokony ho mora ho an'ny olon-kafa hamaky.
Amin'ny ankapobeny, tsara ny mampiasa tarehintsoratra 10 na 12 dot sy endri-tsoratra tsotra mora toa an'i Arial, Calibri, na Times New Roman. Rehefa tonga amin'ny loko ny mainty dia ny safidy tsara indrindra.
Jereo tsara ny feonao
Tahaka ny fahaverezan'ny vazivazy, ny hafatrao dia mety ho diso hevitra. Tsarovy fa ny mpanadina anao dia tsy manana ny fehezan-kira sy ny endriky ny endrik'izy ireo izay ho azony amin'ny adihevitra tokana.
Mba hisorohana ny fahadisoam-panantenana, dia aleo mamaky mafy ny hafatrao alohan'ny hitsidihana ny Send. Raha toa sarotra ho anao izany dia toa sarotra ho an'ny mpamaky izany.
Ho an'ny vokatra tsara indrindra, aza avela mampiasa teny ratsy ("tsy fahombiazana", "ratsy" na "tsy raharahaina") ary lazao foana hoe "azafady" ary "misaotra".
Fampatsiahivana ny drafitry ny cybercourtoisie 7 martsa 2020Tranquillus
Teo alohaNy drafitra amin'ny fanoratana mailaka mahomby